Nchịkwa Ngwongwo Ngwongwo Mba SINAP - Geofumadas
Disemba, 2016 Apụta, Geospatial - GIS, My egeomates, Land Management
Nchịkwa Ngwongwo Ngwongwo Mba (SINAP) bu ihe omuma nke teknụzụ nke jikọtara ozi niile metụtara akụ na ụba na nke mba, ebe ndị ọrụ ọha na eze na ndị mmadụ n'otu n'otu na-edekọ azụmahịa niile metụtara akụ akụ. ihe onwunwe, dị mkpa maka usoro iwu na ike nke ahịa ngwaahịa.
Ihe oyiyi dị n'aka nri ga-ahụ ebe, n'ihi na ọ bụ ihe nkwụsị na otu ụbọchị m mere n'oge ezumike m LADM, n'otu n'ime ihe ngosi nke Amsterdam, ebe 2012 nọ.
A mụrụ SINAP ma mejuputa ya na Honduras na 2002-2005, n'ime usoro nke Mmemme Nchịkwa Ala, nke yiri nke a na-eme n'oge ahụ n'ọtụtụ mba n'okpuru nkwado ego nke World Bank. Amughi ya dika nkpuru obi nke ala ozo, ntoala ya di na akuko ochie nke na akwado nkwado uzo, ebe ihe nlere maka mmepe ahia di, n'otu aka, ihe ibelata mmefu ego(akụrụngwa, akụ mmadụ, nkà na ụzụ na isi obodo) na, n'aka nke ọzọ, ibelata ụgwọ ego. Yabụ, na-enye ihe isi ike nke mbenata ụgwọ nrụpụta na mba na-emepe emepe, SINAP bụ isi okwu bụ ịbelata ọnụ ahịa na oge.
SINAP bụghị a na kọmputa ngwá ọrụ, ma a set nke atumatu tinyere technology mmepe, mwekota nke institutional nketa oke aka na ala oru na simplification nke usoro dabeere na mba na ọnọdụ na ụkpụrụ na doo nke ozi teknụzụ na nkwukọrịta.
Mgbe echetara SINAP, enwere nghọta doro anya nke na naanị itinye teknụzụ, na-enweghị ịgbanwe usoro iwu na nke ụlọ ọrụ, dịka ịtinye taya na ịnyịnya, kama ị mepụta ụgbọ ọhụrụ. Ya mere, atụmatụ a na-esonyere mgbanwe dị egwu nke na-agụnye ịmepụta iwu ọhụrụ dịka Iwu Ngwongwo na Iwu Iwu Ala; N'okpuru usoro iwu a, a na-emepụta Institutelọ Ọrụ Ngwongwo, nke na-eme ka Ndenye Njirimara (nke bụ Courtlọikpe Kasị Elu nke Ikpe Ziri Ezi), National Cadastre (nke bụ Executive Directorate dabere na ndị isi oche) na National Geographic Institute ( nke ahụ dabere na Mịnịstrị nke Ọrụ Ọha na andgbọ njem).
The ọhụrụ alụmdi bụ a Directorate of Records, a Directorate of Cadastre na Geography na adreesị Regularization n'okpuru ihe ngwa anya lekwasịrị anya outsourcing site Associated Ụlọ Ọrụ na ike inye municipalities ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'okpuru ọha-onwe ediomi.
A mụrụ SINAP n'okpuru akwụkwọ ndebanye aha ngalaba Core (CCDM), akwukwo na n'oge ahu bu abastracto nke Christiaan Lemmen na ndi ozo ndi choro itinye aka na Cadastre 2014.
The CCDM na 2012 ghọrọ LADM (ISO-19152), ma n'oge ahụ (2002) ama a zuru ezu tozuru okè echiche nke otú ihe na-arụ ọrụ na ala ochichi ha nwere ike na-mfe mfe mmekọrịta nke Iwu, njide onwe onye na Ibu Ọrụ (RRR ) n'etiti ndị nwere mmasị (Party) na ndebanye aha (BAUnits), ya na cadastre dịka ihe gbasara ihe gbasara ihe na ihe osise dị ka iwu nke iwu ọha na eze na-emetụta iwu onwe onye.
Nke a bụ atụmatụ ebumnuche nke SINAP na afọ 2004; na a usoro nke transactional ọnụ nke n'oge ahụ mere: SINIMUN maka municipalities, INTUR maka njem oru, SINIA Environment, SNGR maka ize ndụ management, CIEF maka oke ohia na INFOAGRO maka ugbo oru.
Akara ahụ dị n'aka nri bụ nke m mere ka m degharịa na 2012, na-elekọta njirimara nke dị. Na nchịkọta a chịkọtara, SINAP bụ nyiwe nke na-ejikọ ma ọ dịkarịa ala usoro anọ dị n'okpuru:
The Unified System of Records.
Usoro a gụnyere, n'etiti ndekọ ndị ọzọ, ezigbo ihe onwunwe na ndekọ cadastral dị ka otu eziokwu. Ọ pụtara na ngwugwu cadastral bụ oke zuru oke nke ókèala ahụ, ma ala nke onwe nke ejikọtara na ihe ndị edebanyere aha n'okpuru ezigbo usoro folio, yana ngwongwo nke ọha na eze dịka n'okporo ámá na osimiri ndị metụtara folio nchịkwa. Tụkwasị na nke ahụ, ngwugwu ndị ahụ na-egosipụta dị ka mmetụta nhụjuanya nke eserese metụtara na iwu ọha na eze, yana mpaghara idei mmiri, ebe echedoro, ebe akụkọ ihe mere eme, wdg.
SURE abụghị nanị na-agụnye ezigbo ala; bụ ihe na-adịghị njọ iji jiri nwayọọ nwayọọ jikọta ngwá ahịa dị iche iche nke mba ahụ; ugbu a na-agụnye ala azụmahịa, ike, ọgụgụ isi na ụgbọala.
National Information System (SINIT)
Usoro a na-edeba ma bipụta ozi niile eserese nke ụlọ ọrụ dị iche iche nke mba ahụ mepụtara ma mepụta ọrụ agbakwunyere bara uru nke ọ na-enye ndị ọrụ n'okpuru otu usoro amụma ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-akpọsa ozi gbasara ohere gbasara ụwa, mezue ọrụ nke ebe nchekwa ihe ọmụma iji zere ọnwụ nke ozi nke ụlọ ọrụ ọha na eze mepụtara yana yana dị ka akwụkwọ mbipụta maka ndị na-enweghị akụrụngwa dị mkpa iji jee ozi ha mepụtara.
Ndebanye aha nke Iwu Nchịkwa (RENOT)
Nke a bụ ndekọ na-ejikọ usoro niile nwere njirimara metụtara ma ọ bụ uru maka ojiji, ngalaba ma ọ bụ ọrụ nke atụmatụ ahụ. Ejikọtara mmalite nke ndekọ aha a na Territorial Ordinance Law, na-achọ ka atụmatụ iwu na usoro iwu ọha na eze nke ụlọ ọrụ dị iche iche mepụtara ga-arụ ọrụ ma gosipụta dị ka mmetụta na ngwugwu na asambodo ma ọ bụ asambodo cadastral, yana na njikwa usoro ma ọ bụ asambodo na njirimara nke Njirimara Njirimara.
N'agbanyeghị na godparents nke RENOT gbanwere n'oge dị iche iche, echiche na-anọgide n'otu ha mkpa map na-ese na-adịgide adịgide, "iwu ọnọdụ entitling ụkpụrụ nke nkwenye, ọpụrụiche mgbasa ozi na ndebanye aha na ga-adị ka ndị na-achịkwa nke ọha na eze na-egosipụta na ihe onwunwe »
Ihe Njirimara Ntaneti National (INDES)
N'ezie, ọ bụghị ihe niile dị mfe itinye ya n'ọrụ. Na 2002, isiokwu nke Spatial Data Infrastructures dị obere, ọ dịkarịa ala na mba ndị a ebe ikike ụlọ ọrụ na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ na-enweghị obere ihe. N'oge ahụ a na-akpọ usoro nke anọ Clearinghouse, okwu iri asatọ nke na-echetara anyị igwe nchọ metadata ndị ama ama. Maka afọ m ga-anabata ya, anyị na-akpọ ya National Spatial Data Infrastructure (INDES).
Ndi SINAP ọ bara uru?
Egosiputa SINAP na onodu mba di iche iche, obu ezie n’uche nkem, o na-ata ahuhu site n’aka ndi ode akwukwo choro igwa banyere uru o bara n’ile anya mmadu. Maka anwụrụ ọkụ amụrụ site na ncha, na tebụl iko na iko kọfị ole na ole, na mba nwere nsogbu nrụrụ aka na nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị yiri nke ọtụtụ mba nwere ọnọdụ Hispanic, SINAP bụ ezigbo ihe atụ na ọtụtụ akụkụ. N'ime usoro anọ ndị a, SURE bụ nke nwere ọnọdụ nkwado kacha mma, ebe ọ bụ na e mepụtara mmepe ya n'oge edere dị ka ndị nne na nna nna ya si echegbu onwe ya na n'ihi na ha na-emejọ iji na-eme mkpọtụ ọtụtụ iwu maka iwu ọhụrụ na mgbanwe ụlọ ọrụ, ihe na-adịghị mfe (ma ọ bụ atụ aro) ịme na mba ọ bụla; ọ bụ ezie na maka nke a ha ga-awụlikwa elu ihe mgbochi dịka ịghara ịmetụ koodu obodo aka (nke otu n'ime ụbọchị ndị a ga-agafe ụgwọ ahụ), yana oke omume dị na ọrụ Cadastre-Registry, ọ bụ ezie na a gụnyere ya na ndị ọkachamara akwadoro.
N'ihe gbasara mmepe nke ụlọ ọrụ, ọtụtụ nsogbu, dịka usoro mmezi nke Ụlọ Ọrụ ahụ, enweghi ọrụ ọrụ obodo na njikọ ndị a na-enweghị atụ na ndị ọrụ ejirila mee ka ọ daa oge kachasị mma nke Ụlọ Ọrụ Na-ere Ihe; Otú ọ dị, SURE dị ka nkwukọrịta teknụzụ kwesiri nkwanye ùgwù nke mere ka ọ nọgide na-arụ ọrụ dị ka nchịkọta ọrụ.
Enwereghi ngwanrọ n'efu maka oge ahụ site n'ikike ntozu okè, ya mere ọ dị mkpa iji ọtụtụ nkà na ụzụ, inye ihe atụ:
E mepụtara mawapụta dijitalụ site na ịmepụta VBA, site na ntinye aha nkwekọrịta, na nsụgharị akụkọ nke DGN V8, na njikwa ego ndenye ego site na iji ProjectWise,
N'iji onye na-ekiri weebụ ActiveX, ndị ọrụ nọ na obodo chọrọ ịrịọ maka azụmahịa na-eji DGN redline, GeoWeb Publisher na onye nyochaa weebụ.
Cadastral akwụkwọ ọgbọ nwere ike mee si Microstation Geographics ahịa, ha na map, cadastral data na ntụziaka igbe nanị site ị na-ahọrọ ndị cadastral isi; mgbe online gị nwere ike na-eme iji GeoWeb nkwusa, n'otu n'otu ma ọ bụ oke, na-amụba PDF files nwere alphanumeric data na ndịna.
A na-edepụta ma na-ewepụta akwụkwọ ndekọ aha na ngwa ngwa ndị na-agbanwe ọrụ a siri ike n'ime usoro usoro, nke e mesịrị mepụtakwara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
E mepụtara usoro nhazi nke azụmahịa na ngwa ngwa nke ọma.
Ikekwe iji teknụzụ ndị ahụ niile, ndị ọrụ ahụ niile na ọkwa akpaaka ahụ nwetara ya BeAwards award na 2004 (taa bụ BeInspired), na ngalaba njikwa gburugburu na 2005 na ngalaba gọọmentị. Ma ule acid bụ mgbe na 2006 ọ ga-eche ihu na mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọzọ dị iche iche na usoro ọdịnala ndị ahụ niile nke nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọchịchọ ihichapụ ihe niile wee bido site na ncha.
Otu ụtụtụ, ha na diski mpụta (bụ nke ọhụrụ n'oge ahụ), na-ekwu na e debere Unified System of Records na diski ahụ ... ha kwụsịrị ịjụ mgbe ha ghọtara na ha ga-achọ ọtụtụ diski mpụga.
N'ụtụtụ ọzọ, mmadụ rịọrọ njikwa onye ọrụ nchịkwa nchekwa data. Mgbe ụbọchị abụọ gasịrị, o chefuru paswọọdụ ahụ, ọ dịkwa mkpa kwa ụbọchị atọ iji malite nchekwa data mgbe akpaghị aka na-etiti abalị, ebe ọ bụ na n'oge ahụ enweghị usoro izipu ihe nkesa na ụdị okike nọ na-arụ ọrụ mgbe ndabere n'etiti 12 n'abalị na 6 nke ụtụtụ.
Akwụkwọ ndekọ ndị na-eji usoro ahụ amalite ịka mkpesa, mgbe ahụ nwatakịrị ahụ ghọtara na System ahụ abụghị naanị ndị ọkachamara dị mma iji mee ka ngosi nke PowerPoint.
O doro anya na site na mmejọ e mere nwere nkuzi ndị bara uru karị nke ndị ọrụ dị iche iche sonyere na nghọta, imewe, mmepe, akwụkwọ, mmejuputa na ọkwa ụlọ ọrụ ga-enwe ike ịkọ. Mgbe usoro ihe ohuru na ndi mmadu sonyere, ohere di na nmehe a gbanwere ndu ha, karie ihe omuma ha nwetara.
Ihe enweghị ike ịgọnahụ maka nkwa Honduras, yana SINAP, bụ na ka oge na-aga, ọhụụ mbụ agbanwebeghị. Usoro ahụ jisiri ike dịrị ndụ oge atọ nke gọọmentị, gụnyere ọchịchị (2009); n'oge a enwere ohere nile nke ọdịda, mana itinye ụkpụrụ nke ọgụgụ isi dị mkpa «ọ bụrụ na ị ga-eme usoro dị ukwuu, mee ka ọ rụọ ọrụ ngwa ngwa«; mgbe ha chọrọ ịlaghachi n'iji akwụkwọ, otu ndị ọrụ ahụ gbachitere ya. Ka ọ dị ugbu a, 16 nke mpaghara ndekọ ndekọ 24, nke na-arụ ọrụ na sistemụ, ka agbanweela. Na 2013, emere atụmatụ ịkwaga na mbara igwe ọhụrụ arụ ọrụ ndị a niile dara ada, tinye sọftụwia mepere emepe iji melite nkwado, yana mgbanwe na usoro azụmaahịa iji kwadebe ya maka ijikọ nke onye ọrụ onwe ya, ịnakwere ya. Kpụrụ LADM na BlockChain technology maka nchekwa data. Otu n'ime ihe mgbakwunye bụ isi bụ nchịkọta na nchekwa data nchekwa, nke a na-egbu site na ndị na-akpalite, yabụ na ọ bụrụ na edebanye aha geometry ọhụrụ na njikọ njikọta (dịka mpaghara echedoro ọhụrụ), a na-emetụta Parcels niile cadastre na-akpaghị aka ma pụta dịka ọkwa mgbochi na mpaghara Registry; Ejikọtakwara teknụzụ mepere emepe dịka OpenLayers, GeoServer na GeoNetwork iji dochie GeoWeb Publisher na BentleyMap iji dochie Microstation Geographics; maka obodo, e mepụtara ọrụ weebụ iji tinye ọnụ site na WFS n'elu mgbakwunye QGIS.
Na eserese na-esonụ m jidere oge nke SINAP, nke na-achọ imeri abụọ ahụ Okwu ọjọọ nke 2014 enwetabeghị mmeri: na ndị ọrụ onwe na ndị ọrụ ọha na eze na-arụkọ ọrụ ọnụ, nke na-eduga n'ịchọpụta akpachapụghị anya maka njikọ aka ọha na eze na nrigbu dị ukwuu nke ọgụgụ isi azụmaahịa nke na-enye ohere ka akwụghachi ụgwọ zuru oke.
N'okpuru ọhụụ ọhụrụ, SINIT na RENOT sistemụ adịghịzi mkpa dị ka sistemụ ndị ọzọ, dị ka atụpụtara site na njedebe teknụzụ na ikike ịgba akwụkwọ nke 2004. SINIT bụ naanị otu ndekọ nke SURE (The Cartographic Registry) na RENOT the Normative Registry; usoro ohuru a ka na-etolite; Ihe ngosi dị n'okpuru ebe a na-egosipụta ụfọdụ akụrụngwa teknụzụ gị.
Ọ bụrụ na ihe na-aga n’ihu ugbu a, SINAP ga-enwe ike mejupụta atụmatụ ya nke sitere na mbido n’okpuru echiche nke Centers Centers; ịbụ naanị ndekọ na Cadastre naanị ngalaba na-achịkwa usoro n'ime a usoro nke etiti arụ ọrụ n'okpuru nhazi nlekọta azụ.
Ya mere, ndị obodo ahụ na-ahụ maka mmezi nhazi nke ụlọ na ndokwa nke ọrụ ndị metụtara azụmahịa; ugbu a na ọtụtụ municipalities a na-eme n'okpuru atụmatụ nke mbon, azụmahịa na mortgages na na-na-ejikwara site ụfọdụ mmiri ka elu ụlọ ọrụ, dị ka Mercantile ndekọ na-ejikwara site Chamber of Commerce na nwa akwukwo ime ihe karịrị nke ahụ ...
O doro anya na nnukwu adịghị ike nke SINAP ga-abụ ogologo oge, enweghị ndị na-ede uri na-ekwu maka ikike ya site na ọkwa echiche, teknụzụ na teknụzụ. Obi ọmịiko, na-eche na ọ bụ ikekwe ọkọlọtọ mbụ nke LADM, tupu ọ bụrụ ọkọlọtọ (CCDM); uru ndị mba ndị ọzọ dịka Colombia ga-ewere, ebe ụdị ebube a akwụsịghị ịba uru ma tinye ya na amụma ọha, dịka egosiri na 3859 NKWUKWU.
Ihe mmuta sitere na SINAP ruru opekata mpe 8, ma bara uru nke ukwuu… ebe ọ bụ na anwụrụ ọkụ a bara nnukwu uru. A ga-enwe oge ikwu banyere ya, obi ụtọ na njedebe nke afọ 2016.
Previous Post«Previous Allplan: 4 2017 ekwe nkwa ọhụrụ mmalite
Next Post Bentley Systems - SIEMENS: atụmatụ emere maka ịntanetị nke iheNext »
2 na-aza "Sistem Nchịkwa Ngwongwo Mba SINAP"
Nke ahụ ziri ezi, ụdị ọhụụ, nke ka dị na mmepe, na-agụnye ọrụ ka ndị ọrụ na-eri, melite ma na-akpọsa ozi gbasara njikwa ókèala nwere ike ijikọ. Otu ihe atụ dị otu a bụ Munital SIT, nke ndị ime obodo nwere ike ịrụ ọrụ maka nchekwa na modast Cadastre, mana ha nwekwara sistemụ nhazi mpaghara site na nke ha nwere ike itinye aka na atụmatụ ha.
Francisco Puga kwuru, sị:
Egwu Enweghị m ike ichetụ n'echiche ihe isi ike nke ịrụ ọrụ yiri nke ahụ. Ị tụlewo ohere nke ịchọta ozi site na API? Nke a ga - eme ka ndị ọrụ ndị ọzọ, dịka ndị NGO na-arụ ọrụ n'ókèala mba ahụ, iji jikọta ọrụ ha n'ụzọ dị mfe na cadastre obodo.